Wargeys Mareykan Ah Oo Soo Jeediyey Talladii Nabi Muxamed SCW Uu Bixiyey Si Loola Dagaalamo Cudurka Coronavirus – somalilandtoday.com
Wargeys Mareykan Ah Oo Soo Jeediyey Talladii Nabi Muxamed SCW Uu Bixiyey Si Loola Dagaalamo Cudurka Coronavirus
(SLT-Washington)-Wargeyska Newsweek ee dalka Mareykanka ayaa warbixin uu qoray ku iftiimiyey in dhakhaatiirta adduunka ay bilaabeen inay ku baaqaan talladii uu Rasuulka SCW uu sheegay 1400 sano ka hor, taasoo looga hortagayo cudurada faafa.
Arrintaan ayuu wargeyska ku sheegay maqaal uu sameeyey cilmi-baadhe Mareykan ah oo lagu magacaabo Dr. Craig Considine, kaasoo sheegay in cudurka ka dilaacay adduunyada ee Coronavirus uu ku qasbayo dowladaha iyo aaladaha warbaahinta kala duwan inay bixiyaan talo sax ah oo ka caawineyso bulshada adduunka inay wax ka qabtaan cudurkaan faafayo ee khatarta gelinayo aadanaha oo dhan.
Cilmi-baadhahaas ayaa intaas ku daray, in Coronavirus dartiis ay sare u kacday baahida loo qabo tallada khubarada daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale seynisyahanada ku lugta leh daraasadaha cudurada faafa iyo saameyntooda.
Cilmi-baadhahaan Mareykanka u dhashay oo soo xiganayo Dr. Anthony Fossey oo ku takhasusay cilmiga difaaca Jidhka iyo Dr. Sanjay Gupta, oo ah wariye dhanka caafimaadka ayaa yiri “Joogteynta Nadaafadda, karantiilnimada, ama ku-dhaqanka kala fogeynta bulshada, iyadoo la rajeynayo ka-hortagga faafidda cudurrada faafa, waa tallaabada ugu waxtarka badan gaar ahaan waqtigaan hadda la joogo oo adduunyada la tacaaleyso Virus-ka cusub ee Corona”.
Considine, oo hore u qoray laba buug oo uu kaga hadlayey Islaamka ayaa la waydiiyey su’aal uu isku dayey inuu ka jawaabo oo aheyd “Ma taqaanaa cidda ku talisay nadaafad iyo karantiil marka uu dillaaco cudur faafa? wuxuu ku jawaabay isagoo leh ” Nabiga Islaamka Muxumed Naxariis iyo nabad galyo korkiisa ahaatee 1400 sano ka hor”.
Qoraaga ayaa hadalkiisa kusii daray “Inkastoo Nabiga Islaamka uusan aheyn khabiir dhanka arrimaha la xidhiidha cudurada dilaaga ah, haddana wuxuu bixiyey talo fiican oo looga hortagi karo faafitaanka cudurada faafa sida Virus-ka cusub ee Corona”.
Wuxuu intaas ku daray: “Nabi Muxamed SCW wuxuu yiri: Haddii aad maqasho dhul gaar ah oo uu ku faafay cudurka Daacuunka ha gelina, balse haddii uu cudurka ku faafo meel aad joogto haka soo bixin, Wuxuu kaloo yidhi: Kuwa cudurrada faafa qabo waa in laga ilaaliyaa dadka kale ee caafimaadka qaba.”
Qoraaga oo sii wado su’aal is waydiinta ayaa yidhi “Haddiiba uu qof xanuunsado, waa maxay talada uu Nabi Muxammad SCW ku taliyey in la siiyo dadka xanuusan? Qoraaga wuxuu ku jawaabay: Runtii wuxuu ku dhiirigaliyey inay raadsadaan dhakhaatiir iyo dawo” wuxuuna qoraaga soo daliishaday Xadiiska uu Nabiga ka wariyey Usaama Bin Sharik ee uu ku yiri ” Acraabi ayaa saruulka ku dhahay “Rasuulkii Allow miyaan is daaweynaa? Rasuulka ayaa yidhi: Addoomihii Allow is daaweeya, Ilaahey ma keenin cudur illaa wuxuu u dajiyey daawo hal cudur maahane, waxay Rasuulka ku dhaheyn waa kee cudurkaas, wuxuu ku yidhi ” duqnimada”
Qoraaga ayaa sheegay in Nabiga Islaamku uu ahaa mid ay ka buuxdo Xikmad isku dheeli tireyso Iimaanka iyo Caqliga, wuxuuna sheegay in asbuucyadii lasoo dhaafay ay qaarkood arkeen in Salaadda kaligeed ay awood u leedahay inay dadka ka ilaaliso Coronavirus, iyadoo aan loo hoggaansamin xeerarka aasaasiga ah ee go’doominta bulshada iyo karantiilka.
Dhammaadka maqaalkiisa ayuu qoraaga ku sheegay inay mudan tahay in lagu daydo qisadii uu soo wariyey Tarmadi ee uu ku sheegay in Maalin uu Nabiga u yimid nin reer baadiye ah oo Nabiga kala tashanayey arrin ku saabsan hashiisa: “Nin baa yidhi, Rasuulkii Ilaahayow, hasheeda ma xiraa kadibna alle maku kalsoonaadaa, mise waa sii daayaa oo Alle ayaa ku kalsoonaadaa, wuxuu yidhi: Xidh kadibna Alle ku kalsoonow”.
Qoraaga ayaa sheegay inkasta oo uu Nabiga Maxamed SCW ku taliyay in diinta ay tahay dastuur dhameystiran oo dhanka nolosha aadanaha, wuxuu sidoo kale ku booriyay in taxadarka lagama maarmaanka ah la qaado si loo hubiyo xasilloonida, nabadgeliyada iyo wanaagga dhammaan